नायिका स्वस्तिमा खड्का आफ्नो समाजिक संजालमा रमाइरहेको फोटो शेयर गर्न मन पराउँछिन् । हाल उनी अष्ट्रलियाको समुन्द्रमा रम्दै गरेको तस्बिर इन्स्टाग्राम र फेसबुकमा सार्वजनिक गरेकि छिन् । उनले आफ्नो समाजिक संजालको ‘डे’ मा तस्बिर सार्वजनिक गरेकि हुन् ।
०७५ मा स्वस्तिमा खड्काले अभिनय गरेको ‘बुलबुल’, ‘जय भोले’ र ‘नाइँ नभन्नु ल ५’ रिलिज भयो । यो वर्ष उनी अभिनित सबै फिल्मको व्यापारिक रिपोर्ट औसत नै थियो तर ‘बुलबुल’मा उनले गरेको अभिनयले सर्वत्र प्रशंसा पायो ।
समीक्षकहरुले ‘बुलबुल’को अभिनयलाई स्वस्तिमाको करिअरकै उत्कृष्ट अभिनयको रुपमा विश्लेषण गरे । उनले निर्वाह गरेको टेम्पो ड्राइभरको भूमिकाले उनलाई ०७५ को अब्बल अभिनेत्रीको सूचीमा पु¥यायो ।
पाठ पढाउने ‘बुलबुल’
श्रीमान् विदेश गएको ६ वर्ष भयो तर अझै घर फर्किएका छैनन् । यसरी श्रीमान् कुरिरहेकी रणकलालाई जर्बजस्त प्रेम गर्न थाल्छन्, अर्घाखाँचीका चोपेन्द्र भुषाल (मुकुन भुषाल)। दिनहुँ उनकै टेम्पो चढ्छन् । सहचालक बनेर ‘छाउनी, स्वयम्भू, भगवानपाउ…’ भन्दै उनलाई यात्रु बोलाउन सघाइदिन्छन् ।
चोपेन्द्रको प्रेमलाई रणकलाले कसरी लिन्छिन् ?
एउटी टेम्पो महिला चालकको जिन्दगी कस्तो हुन्छ ?
ग्यारेजको मिस्त्रीले रणकलासँग कस्तो व्यवहार गर्छ ?
यात्रुले हेर्ने नजर कस्तो हुन्छ ?
श्रीमान् विदेश भएकी महिलालाई समाजले कसरी मौका छोप्न खोज्छ ?
फिल्ममा निर्देशकले रणकलामार्फत यिनै प्रश्नहरुको जवाफ दिने प्रयत्न गरेका छन् । दर्शकले फिल्ममा सूत्र खोज्दैनन्, पात्र खोज्छन् । फिल्म हेर्दै गर्दा यस्तै लाग्छ । निर्देशकले कथा भन्नलाई फिल्मको कुनै परम्परागत सूत्र र संरचना पछ्याउन आवश्यक ठानेका छैनन् । आफूलाई भन्न मन लागेको कथा आफ्नै शैलीमा भनेका छन् । त्यसैले पनि दर्शकलाई पृथक् र मौलिक लागिहाल्छ ।
‘बुलबुल’ अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काको करिअरमा सम्झनलायक फिल्म हो । उनले यसमा जस्तो अभिनय यसअघिका कुनै फिल्ममा गरेकी थिइनन् । लक्ष्मी बर्देवाको अभिनय झन् बुलन्द छ । फिल्म हेर्दा यस्तो लाग्छ, सायद स्वस्तिमाको चरित्रमा लक्ष्मी भएको भए झन् गज्जब हुन्थ्यो । नेपाली फिल्म क्षेत्रका लागि ‘बुलबुल’ले दिएको एउटा सुन्दर उपहार हो– मुकुन भुषाल ।
उनको हाउभाउ र अभिनय कहीँकतै पनि दर्शकलाई बिझाउँदैन । चोपेन्द्रको चरित्रमा उनी जीवन्त लाग्छन् । अर्घाखाँचीका उनले आफ्नै गाउँघरको बोली बोल्दा दर्शकलाई प्रिय लाग्छ । जोयस पान्डे, दीपक क्षेत्रीको अभिनय पनि फिल्ममा स्वाभाविक नै छ ।
शंकै छैन, ‘बुलबुल’ नेपाली फिल्ममा नयाँ प्रयोग हो । हलमा दर्शक बटुल्लारनबटुल्ला त्यो अर्कै कुरा तर नेपाली फिल्मको परम्परागत कथ्य शैलीलाई प्रहार भने पक्कै गर्छ । फिल्म यसरी पनि बनाउन सकिन्छ भनेर पुरानै ढर्रामा अल्झिएका फिल्मकर्मीका लागि ‘बुलबुल’ एउटा पाठ बन्न सक्छ । खड्का हिट चलचित्र ‘होस्टल रिटन्र्स’बाट कलाक्षेत्रमा डेब्यु गरेकी हुन् अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काले ।
पहिलो चलचित्रबाट नै उनी सफलताको झण्डा गाड्न सफल रहिन् । अभिनयको सफलता सेलाउन नपाउँदै निर्देशक निश्चल बस्नेतसँगको लगनगाँठो उनको अर्काे चर्चाको विषय बन्यो । केही वर्ष अगाडि उनले निर्देशक निश्चल बस्नेतसँग लगनगाँठो कसेकी हुन् । म्युजिक भिडियो हँुदै चलचित्र यात्रा थालेकी खड्का अहिले फेरि चर्चामा छिन् ।
थुप्रै म्युजिक भिडियो र केही भिडियो चलचित्र अभिनय अनुभव सँगालेकी उनी अहिले श्रीमान् हिरो रहेको चलचित्र ‘दुई रुपियाँको हिरो’ समेत अभिनय गरिरहेकी छन् । थोरै चलचित्र अभिनय गरे पनि राम्रो चर्चा पाउने अभिनेत्री स्वस्तिमाको रातोपाटी अनलाईनमा सार्वजनिक अन्तर्वार्ता हेरौँः
फुर्सदमा मनोरन्जन कसरी गर्नु हुन्छ ?
मेरो मनोरन्जन लिने प्रमुख साधन भनेको मोबाइल हो । गीत सुन्नेदेखि युट्युबमा विभिन्न भिडियोहरु हेर्नसम्म मोबाइलबाट गर्ने गरेकी छु ।
फिटनेसमा कतिको ध्यान दिने गर्नुभएको छ ?
त्यो कुनै क्लासहरु ज्वाइन गरेकी छैन । ज्वाइन गर्ने प्लान धेरै पहिलेदेखिको हो । म स्लिम छु र बिजी छु । त्यसैले फिटनेसतिर ध्यान खासै दिनुपरेको छैन ।
मोडलिङ फिल्ड मेरो पेशा भएपछि यसमा लगाव नहुने कुरै भएन । अरु मोडल अभिनेत्रीको तुलनामा म फेसनएबलभन्दा पनि कम्फर्टेबल पहिरनमा जोड दिन्छु । म फेसन कन्सियस नभएको पनि होइन । ठीकै छ भन्न रुचाउँछु ।
स्वतन्त्र लाइफलाई विवाहले कतिको प्रभाव पार्दाे रहेछ ?
त्यो आफूमा भर पर्ने कुरा हो । आफ्नो स्वतन्त्रताले कसैले हानि गर्दिएन भने निर्धक्क स्वतन्त्र हुन पाइन्छ । विवाह अगाडिभन्दा पछाडि केही कुरामा बाधिनुपर्छ । प्रभाव अलिअलि पर्छ । तर धेरै कुरा आफुमा भर पर्ने कुरो हो ।
श्रीमान् निश्चलजीसँग कतिको डिस्कस पर्छ ?
पर्छ, नपर्ने भन्ने कुरै हुँदैन । एक दुई दिनसम्म पनि नबोल्ने स्थिति बनेको पनि छ । यस्तो अवस्थामा केटी मान्छेहरुले प्रायः फकाउँदैनन् रे । तर म भने मेरो गल्ती छ भने आफै रियलाइज गरेर फकाउन अगाडि सर्छु । श्रीमान् फकाउन मलाई रमाइलो पनि लाग्छ । धेरै जसो निश्चलजीले नै मलाई फकाउने गर्नुभएको छ ।
जीवनमा गर्न नसकेको कुरा केही छ कि ?
म आर्किटेक्चर अध्यायन गरिरहेकी छु । यसमा मैले ब्याजलर कटाउन सकेकी छैन । पूरा गर्न नसकेको कुरा भनेको यही हो ।
मनपर्ने जनावरको नाम लिनुपर्दा ?
मनपर्ने जनावर कुकुर नै हो । यसमा ह्युम्यान सेन्स रहेको हुन्छ । त्यसपछि मनपर्ने भनेको पान्डा हो । पान्डा अति मनपर्छ, राम्रो लाग्छ ।
घुम्न मनपर्ने ठाउँ छन् ?
मलाई पोखरा नै राम्रो लाग्छ । यो ठाउ नै रमाइलो लाग्छ । त्यसपछि रमाइलो ठाउँ भनेको काठमाडौँ नै हो । आफू जन्मेको हुर्केको ठाउँ भएर होला सायद धेरै रमाइलो लाग्छ । काठमाडौँको जाम र धुलो धुवाँबाट भने दिक्दार छु ।
कलाक्षेत्रमा लागेका व्यक्तिको मन नपर्ने बानी छन् ?
चलचित्र क्षेत्रका धेरै व्यक्तिहरुसँग मेरो त्यस्तो रिलेसन छैन । प्रायसँग हाइ हेल्लो मात्र हो । अभिनेताहरु पनि धेरै क्लोज छैनन् । तर आफूले चिनेको र बुझेको र थाहा पाएको आधारमा भन्ने हो भने दही चिउरे (जता पनि ठिक्क अर्थात दुई चरित्रका) प्रवृत्ति भएका कलाकार धेरै छन् । यी प्रवृत्ति भएका कोही पनि मन पर्दैन ।
हिरो भनौँ कि अभिनेता भनौँ । अभिनेताको रुपमा बिपिन कार्की मनपर्छ ।
तस्बिरहरु हेर्नुहोस ; अष्ट्रेलियाको बिच लगायत पहिलेका तस्बिरहरु